‘चुनावी चर्चा: डन र धनको छ कि नीति सिद्धान्तको ???’ | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
तपाई सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर दुईमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवार हुनहुन्छ । चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ । कस्तो पाउनु भएको छ, चुनावी माहोल ?
हाम्रो संगठन गाउँगाउँ बस्तीबस्ती पुगेको छ । गाउँमा किसानहरु खेतबारीमा व्यस्त छन् । जनतामा ठूला दलका ठूला भनिएका नेताहरुप्रति व्यापक वितृष्णा छ । उहाँहरुको एउटै भनाइ छ, ‘जसलाई भोट दिए पनि उनीहरुले जनताको लागि केही नगरी निजी स्वार्थमा मात्र तल्लीन भए ।’ ग्रामीण भेगमा विकासको कुरा, राष्ट्रियताको रक्षा, जनजिविकाका पक्षमा, रोजगारीका विषयमा नेताहरुसँग कुनै चिन्ता नभएको, बरु उल्टै महंगी र भ्रष्टाचार मौलाएकोमा गुनासो छ । अर्कोतर्फ चुनावी माहौल राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिको आधारमा होइन कि डन र धनले प्रभावित तुल्याएको पाइयो । यो राजनीतिक दल र नागरिकको विकृत मानसिकताको उपज हो ।
तपाईं राप्रपाका वरिष्ठ तथा पाका नेता पशुपतिशम्सेर राणा र एमालेका प्रभावशाली नेता शेरबहादुर तामाङसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईको राजनीतिक उचाई पुग्छ त उहाँहरुसँग चुनाव लड्न ?
जो तपाईँले वरिष्ठ र पाको कुरा गर्नुभयो, पशुपति शम्सेर म भन्दा पाको उमेरको नै हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँ धेरैपटक शासक पनि बन्नुभयो । घराना पनि राणा नै हो भने अर्का एमालेका शेरबहादुर तामाङ प्रभावशाली नेता भनेर भन्नुभयो, उहाँ प्रभावशाली नेता भएर नै पहिले चुनाव जित्नुभयो । भौतिक रुपमा यी दुवै ब्यक्ति बरिष्ठ, पाका र प्रभावशाली हुन् तर कसका लागि भन्ने कुरा हो । उहाँहरु माफिया, ठेकेदार, तस्कर, घुसखोरहरुका लागि हो कि ग्रामीण किसान, मजदुरका लागि ?
म त केवल राजमोको प्रतिनिधि पात्र न हुँ । हाम्रो पार्टीले सधैं राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा मजदुर र किसानको पक्ष लिँदै आएको छ र लिँदै जाने पनि छ । ल अब भन्नुस्, जो सीमित लुटाहा वर्गको पक्षमा काम गर्नेहरुको हाइट माथि र बहुसंख्यक मजदुर र किसानको पक्षमा निस्वार्थ काम गर्नेको हाइट तल हुनसक्छ ? त्यो कदापी हुन सक्दैन । त्यसैले म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, किसान, मजदुर, श्रमजिवीव वर्गको लागि हाम्रो हाइट परिकल्पना गर्न नमिल्ने गरी माथि छ । यो कुरा आम मानिसले बुझ्न जरुरी छ ।
राणा र तामाङको चर्चा सवैतिर छ । तपाईको त नामोनिसाना छैन । तपाई कसरी त्यो दाँजोको नेता ठान्नुहुन्छ ?
उहाँहरुको चर्चा सबैतिर होला तर यो चर्चा के को भन्नुस त ? त्यो चर्चा डन र धनको, आस र त्रासको नै हो । न कि नीतिको । जुन निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत खर्च गरेको पैसाको स्रोत के हो भन्नुस् त ? त्यो सबैलाइ थाहा छ, त्यो पैसा तिनै माफिया, तस्कर, कालोबजारी, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेवापतको हैन ? त्यसले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँछ । जनताको जनजीवनलाई कहाँ पु¥याउँछ ? तपाई एकछिनमात्र सोच्नुस् त । त्यसैले मलाई यस्तो जनविरोधी कामको दाँजोमा जान जरुरी छैन र त्यो हाम्रो पार्टीको नीति पनि छैन ।
बरु राम्रो चर्चा त राष्ट्रिय जनमोर्चा कै छ नि जनताले बुझे भने । जसले राज्यलाई टुक्रयाउने कुराको विरोध गरेको छ, संघीयताको विरुद्धमा लडेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा संसददेखि सडकसम्म नै आवाज उठाएको तपाईँलाइ थाहा छैन ? त्यसैले त्यो त आम जनसमुदाय, बौद्धिक बर्ग, किसान मजदुरहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
वस्तुगत रुपमा कुरा गर्दा तपाई र तपाईको पार्टीले धेरै सिट नजित्ने निश्चितप्रायः छ । १, २ सीट जितेरै पनि के नै गर्न सकिन्छ र ?
हाम्रो पार्टीले कति सिट जित्छ भन्ने मुख्य कुरा होइन । यो चुनाव हाम्रो क्रान्तिकारी उपयोग नै हो । हामीलाई वर्गीय सत्ता चुनावबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास छैन । जुन १–२ सिट जितेर के अर्थ छ ? भन्ने कुरा गर्नुभयो । ल भन्नुस् त हिजो संसदबाट महाकाली सँझौताको विरोध, सभासदहरुले लिएको प्राडो पजेरो सुविधाको विरोध, पुरुष सभासदले लिएको सुत्केरी भत्ताको विरोध, नेपालमा विदेशी सेनाको सुपरिवेक्षणको विरोध, काठमाडौं स्थित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सैन्य क्याक्प राख्ने कुराका् विरोध कसले ग¥यो भन्न सक्नुहुन्छ ?
ती सारा कामहरु त राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै गरेको हो । हाम्रो पार्टी राष्ट्रको पहरेदार हो, श्रमिक जनताको प्रतिनिधि हो । त्यो यिनै शासकले गरेको ब्रम्हलुट, राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता जनताको बिचमा पु¥याएर पनि काफी हुन्छ । त्यो संघर्षले नै यी लुटाहा शासकको ढाड भत्काउन जनताको व्यवस्था ल्याउनको लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने छ ।
राजमो बामपन्थी पार्टी । बामगठबन्धनमा जानुभएन । के सीटको कुरा नमिलेको हो ?
हो हामी अब्बल वामशक्ति नै हौं । हाम्रो पार्टीको बाग्लुङ र प्युठानमा मात्र एमाले एमाओवादीसँग चुनावी तालमेल भएको छ । तर एमाले एमाओवादीले बामठगठबन्धनको जुन प्रोपोगाण्डा गरिरहेका छन्, त्यो सत्य हैन । समान नीति र विचार बोक्ने राजनैतिक शक्तिबीच एकता हुनु ठिकै हो । तपाईले देखि राख्नुभएको छ । यो गठबन्धनले झापामा कमल थापाको राप्रपा र तराईमा राजपा हृदयश त्रिपाठीलगायत अरु पनि यही गठबन्धनबाट चुनाव लडिरहेका छन् । त्यसैले यो बामपन्थी गठबन्धन हैन । अर्को हाम्रो सिट संख्याको कुरा छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन ।
तपाईँहरु सधै ठूलो कुरा गर्ने तर जनताको मन जित्न चाहीं कहिल्यै नसक्ने । गफले च्यूरा त भिज्दैन नि !
त्यो तपाईँलाई लागेको मात्रै हो । हामीले जनतासँग कहिले पनि ठूलाठूला कुरा गरेको छैनौं । हामीले हाम्रो पाटीको नीति, सिद्धान्त भित्र रहेर जनपक्षीय आवाज बुलन्द गरिरहेका छांै । जुन जनताको मन छुने, चुनाव जित्ने कुरा गर्नुभएको छ, हामीले जनतालाई कहिले पनि ढाँटेका छैनौं र ढाँट्दैनौ पनि ।
एमाले, एमाओवादी, कांग्रेस जस्ता ठूला भनिएका दलहरु नेपाललाई कहिले सिंगापुर, कहिले स्वीटजरल्याण्ड बनाउने छौं भनेर सपनाको खेती गर्छन् । चुनावको बेला भोट माग्न अनेकौ आश्वासन दिन्छन् र चुनावपछि केही गर्दैनन् । ठूला भनिएका दलहरु जनतालाई अनेकौ प्रलोभनमा पारेर सोझासिधा जनताको मतले पटकपटक चुनाव जित्छन्, जुन काम हामीबाट हुँदैन । जनतामा पनि राजनीतिक चेतनाको विकास पूर्ण रुपमा नभइसकेको अवस्थाका कारणले पनि हामीलाइ जनताले पहिचान गर्न नसकेको होला । सारमा हामीले मन जित्न नसकेको भन्ने कुरा सत्य होइन ।
तपाईँहरुले सघीयताको खुब विरोध गर्नुभयो । अहिले त्यहीं सघीयता कार्यान्वयन गराउने चुनाव जित्न लागिपर्नु भएको छ । किन ?
हाम्रो संघीयताको विषयमा विमति छ । भूगोल, विविध जाति, धर्म, भाषा, स्रोत÷साधनको परिचालन र वैदेशिक शक्ति र राष्ट्रको खर्चका कारण अनेकौं दृष्ट्रिकोणबाट यो देशको लागि आवश्यक छैन । घातक छ । दोस्रो कुरा जुन हाम्रो यो व्यवस्था जित्नका लागि चुनावमा भाग लिने कुरा छ, यो हाम्रो जित भयो भने हामी संघीयताको खारेज गरेरै छाड्ने छौं । हाम्रो चुनावी सहभागीता संघीयताको रक्षा र सुदृढिकरणको लागि होइन, खारेजीको लागि हो । हामीले जनताका माझमा यहीं कुरा भनेका छौं ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा र सिन्धुपाल्चोकमा तपाईंलाई मतदाताले किन मत दिनुपर्ने ?
जनताको पक्षमा, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविकाको रक्षा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा निरन्तर रुपमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउँदै आएको पार्टी भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो । जसले सधंैभरी जनताको पक्षमा नै काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले आमजनताले राष्ट्रिय जनमोर्चाको गिलास चिह्नमा नै मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचार, कार्यक्रमलाई जनताका बीचमा लैजाने पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु । म आमजनतालाई यो भन्न चाहान्छु कि, हिजोदेखि तपार्इंहरुले एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपालगायतका सवै राजनितिक दललाइ मतदान गरिसक्नु भयो । तपाईँको मत राष्ट्रियताको विरुद्धमा, जनतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग गरे । जनघाती कामहरु गर्दै भ्रष्टचारी, तस्कर, शोसक र जालीफटाहाहरुका पक्षमा काम गरेर निमुखा जनताको जीवन झन कष्टकर बन्दैछ । त्यसैले यसपटकको चुनावमा आफ्नो अमूल्य मत देश र जनताको हितमा काम गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिह्न गिलासमा प्रदान गर्नुहोस् । – नेपालीपत्रबाट